SIDEE LOO BEDELAA FICUS: TALLAABO FAAHFAAHSAN OO TILMAAMAYA TALAABO TALAABO LOOGU TALAGALAY GABBALAHA CUSUB - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo soo qaato dheriga iyo ficus-ka bedelka guriga
Koboca xayawaankaaga u gaar ah waxay siisaa daryeelka gaarka ah ee warshadda. Wuxuu u baahan yahay waraabinta, quudinta bacriminta, iyo sidoo kale dabeecad gaar ah microclimate ee deegaanka dabiiciga ah. Si kastaba ha ahaatee, ha ilaawin waqtiga transplanting wakhtiga. Dherar xoog leh ayaa sababi kara cirridka iyo dabeecadda nidaamka xididka ficus, kaas oo si toos ah u saameynaya waxqabadka. Sidaa daraadeed, maanta waxaan tixgelin doonaa arrintan sida ugu ballaaran ee suurtogalka ah, iyo sidoo kale go'aaminta dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee xubinta taranka ee ficus.
Transplanting waa hab-raacyo aad u culus iyo nidaam jilicsan, maadaama ficusku uu aad u xasaasi u yahay isbedel kasta. Xitaa waxyeello u geysataa warshadu waxay sababi kartaa dhimashadeeda, taas oo ah sababta ay muhiim u tahay in la bilaabo nidaamka xaaladaha gaarka ah, ama haddii da'da.
Intee jeer ayey tahay in la soo celiyo warshad: Boog loo qorsheeyey
Qalal-wareegga Ficus waa in loo sameeyaa si waafaqsan qorshaha, nidaamka iyo da'diisa. Tani waxay suurtogal u tahay in aaney kor u qaadin kobcinta iyo koritaanka, laakiin sidoo kale in laga fogaado cudurrada dhirta culus mustaqbalka. Sidaa darteed, iibsashada ficus dukaanka, ha ahaato caajis si aad u ogaato da'da saxda ah, taas oo hubaal ah in ay mustaqbalka ka caawineyso.
Ma taqaanaa? Deegaanka dabiiciga ah, ficusku wuxuu u kori karaa qiyaaso waaweyn. In duurka, ee cimilada qoyaan ee qoyaanka, dhirta this koraan karaa ilaa 40 m dhererka, leh dhexroorka garka of 5 m.
Badanaa unugyada ayaa loo sameeyaa si waafaqsan sharciyada guud ee soo socda:
Dhirta dhalinyarada ah ee da'doodu tahay 4 sano ama ka yar ayaa la tarxiilaa sannad walba, tan iyo marxaladdan waxay labalaab ahaanba u labisan yihiin 1 sano.
Ka dib 4 sano, geedi socodka koritaanka ficus waa mid adag oo la xakameynayo, sidaa daraadeed waxaa loo rogaa dher cusub oo aan ka badneyn hal mar 2-3kii sanoba mar.
Ka dib 7 sano, geedka ayaa si buuxda u dejiya dhammaan hababka koritaanka iyo horumarka. Marxaladdan, dhir barar ah ayaa loo baahan yahay ugu badnaan 5 sano oo kasta.
Ka fikir noocyada ugu caansan ee ficuska: Benjamin, lyre, kumbar, iyo microcarp.
Sababaha loogu talagalay ku-tallaalida aan loo baahnayn
Qalab aan toos aheyn waxaa lagu sameeyaa oo kaliya xaalado gaar ah oo leh baahi ba'an. Tan waxaa badanaa looga baahan yahay haddii:
ficus waxaa la soo iibsaday, sida xaaladaha badankood ee dheryaha hoose ee aan lahayn dhamaan sifooyinka lagama maarmaanka u ah dayactirka muddada-dheer;
waxaa jiray baahi loogu talagalay taranta ficus;
dhirta waxaa lagu qallajiyey dheri. Tan waxaa lagu go'aamin karaa adigoo ka soo baxaya xididdada ka soo baxa godadka biyaha;
Dhammaystirida dhamaystirka carrada ayaa lagu arkay (Guryaha nafaqada iyo awoodda ciidda ee lagu nadiifinayo biyaha waa kuwo aad u yar);
Beddelaadda dheecaan ayaa loo baahan yahay.
Xeerarka aasaasiga ah ee loo yaqaan 'transplantation'
Qalitaanka Ficus ma aha shaqo adag. Tani ma u baahan tahay aqoon iyo xirfad gaar ah, sidaas darteed qof walba wuxuu la qabsan karaa hawsha. Si kastaba ha noqotee, si ay geedka uga dhigto mid gebi ahaanba hooseeya ee substrate, waa lagama maarmaan in la abuuro xaalado gaar ah oo ciidda loogu talagalay, iyo sidoo kale inay doortaan weelka beerta si sax ah.
Ma taqaanaa? Hindiya, Benjamin Ficus waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn. Laga soo bilaabo qaybaha kala duwan ee dadweynaha, dadka deegaanka waxay diyaarinayaan lakabyo gaar ah oo loogu talagalay daaweynta caleemaha iyo canuga.
Sida loo doorto ciid
Fikroolka ugu awoodda badani waa gebi ahaan carrada. Waxay si gaar ah ugu koraan carrada bacriminta iyo iftiinka, oo leh tiro badan oo ah nafaqooyin fudud oo la heli karo. Sidaa darteed, si aad u hesho warshad qurux badan oo dhaadheer waa in ay ahaato sida ugu taxadirka badan ee suurtagal ah si arrintan loo wajaho Substrates noocyada kala duwan ee ficus waa in ay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
qoyaan aad u fiican iyo suulasho uumi;
pH ama dhexdhexaad ah (6.5-7) dhexdhexaad ah;
tirada ugu badan oo ah noocyo kala duwan oo yar iyo nafaqeeyayaal yar yar.
Intaa waxaa dheer, da'da ubaxa ayaa sidoo kale si weyn u saameeyaa ka kooban ciidda:
doorashada ugu fiican ee dhirta dhalinyarada noqon doonaa substrate iftiin iyo dabacsan;
Ficus qaangaar ah (5 sano ama ka badan) wuxuu u baahan yahay cufan badan oo cufan, laakiin isla markaa ciidda dabacsan.
Maanta, waxaa jira dhawr wajood oo lagu siinayo ficus leh substrate lagama maarmaan ah. Ciidda waxaa lagu diyaarin karaa gacmahaaga, ama waxaad isticmaali kartaa isku darka ciidda khaaska ah ee dukaamada ubaxa ujeedadaas. Ficus waxaa badanaa lagu dhex daraa substrateada oo dhan iyadoo leh maadooyin adag oo ah dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka ah iyo xeryahooda muhiim u ah jirka dhirta. Wixii bannaanka ugu badan ee hiwaayadda, tani waa xal fiican, sababtoo ah nooc noocan oo kale ah carrada waxay yareyneysaa dadaalka daryeelka mararka qaarkood.
Waxaa jira isku dheelidyo badan oo takhasus leh oo dhirta ah, laakiin maaha wax hooseeya oo ku habboon ficus. Warshadani waa mid aan loo dulqaadan karin qoyaanka xad dhaafka ah, sidaas darteed ciidda isku dhafan oo leh maaddooyin sarreeya ee maaddooyinka dhooba ayaa ka hortagaya. Sababtoo ah joojinta biyaha ee dhoobada dhoobada, waxaa jira feejignaan sare oo muuqaalka muuqaalka ah ee dulinyada kala duwan ee ubax, taas oo kaliya ma sii xumaanayso koritaanka ubax, laakiin waxay sidoo kale keeni kartaa dhimashadiisa. Intaa waxaa dheer, marka la doorto ciid ballaaran oo aan lahayn diyaarinta hordhac ah ee ciidda isku dar ah waa lagama maarmaan. Si kor loogu qaado iftiinka ciidda, beeraha dhirta badani waxay xoog ku talinayaan in ay sifeynayaan substrates sida leh qadar yar oo ciid ah (oo aan ka badnayn 10% guud ahaan wadarta guud).
Ma taqaanaa? Ficus waa hawo nadiif ah oo hawo leh. Tani waa mid ka mid ah dhirta yar oo awood u leh inay si wax ku ool ah u nuugaan oo ay u tuuraan walxaha sunta ah sida benzene, phenol iyo trichlorethylene.
Laakiin, si ay u koraan ficus aesthetically qiimo leh, mid ka mid ma samayn karo iyada oo aan iskood u diyaarin ciidda isku dar ah. Bannaanka adduunka oo dhan wuxuu xusay in dusha sare ee la diyaariyey ay leedahay saameynta ugu faa'iido badan ee ficuusyada, taas oo ugu dambeyntii ay saameyn wanaagsan ku yeelan karto oo kaliya heerka korodhka, laakiin sidoo kale iska caabbinta dhibaatooyinka deegaanka ee kala duwan. Isku darka noocaan ah wuxuu inta badan ka kooban yahay peat, ciid, dhulka cufan, iyo humus caleen. Isku darka ciidda Ficus
Marka transplanting ficus waa mid aad u muhiim ah in la buuxiyo shuruudaha ka kooban ee ciidda. Baro sida loo qaato ciidda ficus.
Si aad u diyaariso isku dhafan tayo leh, dhammaan waxa aad u baahan tahay waa inaad isku dardartaa dhammaan walxahan maadi ah. Laakiin, for dhirta dhalinyarada iyo geedo, isku dar ah oo ka kooban qaybo siman oo peat ah, humus caleen iyo ciid ku haboon yahay. Wixii ubaxa laga bilaabo 4 sano waa inuu diyaariyaa dusha sare ee dhul duurka, humus caleen iyo ciid (1: 1: 1). Waa kuwee maaddooyinka kor ku xusan ee aanad isticmaali doonin, dhammaan qaybaha iskudhiska ciidda waa in si fiican loo isku qasan yahay, natiijada ugu danbaysa substrate waa inay u ekaataa tiro qafiif ah oo qoyan.
Intaa waxaa dheer, haddii aad go'aansato inaad diyaariso ciidda naftaada, dhammaan qaybaha waa in la nadiifiyaa. Ujeedooyinkaas, labadaba heer-kulka iyo heer-kulka heer-kulka ah ayaa loo isticmaalaa. Nadiifinta heerkulka heerkulka sare waxaa lagu sameeyaa iyadoo kululeyneysa qaybaha substrate ee foornada khaas ah ama foornada heerkul ah + 110-120 ° C ilaa 45 daqiiqo. Xaaladdan, labadaba shaybaarka shakhsi ahaaneed ee dhammaan qaybaha iyo jeermi-dilista isku-dar ah ayaa la oggol yahay. Nadiifinta Sooryada
Waa muhiim! Daaweynta jeermiska ayaa ah marxaladda qasabka ah ee diyaarinta subagga, sida microflora ku jirta ciidda waxay keeni kartaa cudurro halis ah iyo xitaa dhimashada ficus.
Nadiifinta heerkulka-hooseeya waxaa lagu fuliyaa iyadoo lagu keydiyo. Si tan loo sameeyo, substrate ama qaybaha shaqsiyadeed waxaa lagu qaboojiyey qaboojiyaha jikada ama qalabka kale heerkulka -20 ° C ee 2-3 cycles, mid kasta oo soconaya 12-14 saacadood. Xaaladdan, waxaa suurtagal ah in ay si buuxda u baabi'iso dhammaan cayayaanka, iyo sidoo kale bakteeriyada halista ah. Si kastaba ha noqotee, haddii tijaabinta qaybo ka mid ah substrate ah meelo u dhow oo leh agrendones adag, cufnaanta ciidda waxay noqotaa mid aan waxtar lahayn, taniyo xeryaha noocan oo kale ah waxaa badanaa lagu qaadsiiyaa xanuunka cudurada fangas badan oo u adkaysta heerkulka hooseeya.
Akhri hababka ugu caansan ee dhalashada ficus ee guriga.
Ficus waxay ku dhowdahay weel kasta oo beerta. Waxaad ka iibsan kartaa labadaba dukaamada beerta khaaska ah, iyo dukaamada caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, dherarka ubaxa ee laga sameeyo caag ama dhoobada ayaa ugu fiican dhirtaas. Waxaad dhisi kartaa dheri gacmahaaga ah, tanina waxay isticmaali kartaa taarbo yaryar ama kumbiyuutaro u adkaysta. Laakiin marar badan, weelasha beerta ficus ee ficus ah ayaa si madax banaan loo sameyaa oo keliya haddii nidaamka xididka dhirta uu ka badan yahay inta ugu badan ee suurtagal ah ee dheriga caadiga ah.
Nooc ka mid ah weelka dhirta ayaa loo kala duwanaan karaa, laakiin weelasha leh dhererka cabbirka iyo dhererka, waxoogaa hoos udhacay saldhigga, ayaa ugu haboon ujeedadaas. Hase ahaatee, dhererku waa inuu ku jiraa gudaha 1 / 3-1 / 4 ee dhirta lafteeda. Haddii aad go'aansato inaad ku koraan warshad ku jirta qaabka bonsai (si ay u sameeyaan manjooyin caadi ah oo joogto ah), ka dibna dheriga ayaa noqon kara mid yar oo hooseeya.
Waa muhiim! Fisuuska waa in la koray weelasha adag, sidaa daraadeed dhererka cusub ee dhererka waa inuu ka badan yahay kan hore oo aan ka badnayn 4 cm.
Miyaan u baahanahay dheecaan?
Biyaha wanaagsan waa qasab in ay sii kordhaan dhirta ficuska, maxaa yeelay warshaddan ma jecla qoyaan xad dhaaf ah. Inkasta oo xaqiiqda ah in carrada dheriga waa in had iyo jeer qoyaan, waraabinta xad dhaafka ah waxay horseedi kartaa duufaanta nidaamka xididka. Sidoo kale, qoyaanka xad-dhaafka ah waxay u horseedi karaan wax-qabashada budada ah iyo cayayaanka kale ee ficuska.
Intaa waxaa dheer, ha ilaawin in dheecaanku uu ku kordhiyo aaraadka dabiiciga ah ee ciidda, iyada oo aan taas oo horumarinta guulaha geedka aan la arkay. Sidaa daraadeed, marka lagu daro godka dheecaanka ee dheriga kasta waa inuu hubiyaa inuu lakabka lafdhabarta ee qalab aan qalafsanayn leh oo leh dherer ah 2-3 cm, oo aad u baahan tahay inaad ku buuxiso dusha lakabka ah ee 1 cm.
dhagaxyo yar yar;
Waxay noqon doontaa mid faa'iido u leh beeralayda ubaxa qibrad leh si ay u bartaan sida loo isticmaalo nalalka dhirta gudaha, sida loo diyaariyo waraabinta ubaxyada inta lagu jiro fasaxyada, sida loo quudiyo dhirta gudaha iyo waxa fangasaska lagu isticmaalo floriculture gudaha.
Sidee loo bedelaa ficus: talaabo talaabo talaabo ah
Si loo bedelo ficus dheriga cusub, aqoonta gaarka ah looma baahna, laakiin habsocodka ayaa wali haysta dhibaatooyin farsamo iyo qarsoodi. Ma aha oo kaliya guushii natiijada kama dambaysta ah, laakiin sidoo kale horumarinta guulaha dambe ee ficusku waxay ku xiran tahay ilaalintooda ku habboon. Sidaa darteed, ka hor inta aan la socon isbeddelka dheriga xiga, waxaa lagama maarmaan ah in lagu barto dhamaan sifooyinka qashinka dhirta.
Qalabka Ficus wuxuu ka kooban yahay marxaladaha soo socda:
Qiyaastii hal maalin ka hor tallaalka la soo jeediyey, waa in dhirta loo waraabiyaa si aad u badan, tani waxay ka caawinaysaa ciidda in ay sii socoto, taas oo ilaalinaysa sharafta nidaamka xididka.
Transplantation wuxuu ku bilaabmaa diyaarinta ciidda iyo dheriga, ujeedadaas, ciidda diyaarisay, ama ciidda madax banaan, waa lagama maarmaan in la boodo shaandhada ganaaxa. Lakabka godka ee 2-3 cm ee dhoobo, dhagaxyada, iwm waa in lagu dhejiyaa dheriga, kaas oo lagu daboolayo lakabka ciidda saafiga ah 1 cm qaro weyn oo ka sarraysa lakabka dufanka, si loo yareeyo heerka mustaqbalka ficus, waxaad u baahan tahay inaad si adag u dhigato carrada cusub.
Kadib waxaad sii wadi kartaa saaridda waxyaabaha ku jira weelkii hore. Si arrintan loo sameeyo, dheriga waa in wax yar laga dhex dhajiyo dhinacyada oo dhan, ka dibna si taxadar leh uga saar carrada iyadoo la raacayo nidaamka asaasiga ah.
Ka hor inta aan la dhigin weel cusub, xididdada warshad waa in lagu baaraa joogitaanka cudurada. Xididdada caafimaadku waa inay noqdaan kuwo aan lahayn wax nabaro jilicsan, leh qaxwo, jaalle ama kareem. Qaybaha ay saameysay waa in la gooyaa baako beereed iyo, haddii loo baahdo, loola dhaqmo xalal gaar ah.
Kadib baaritaan dhamaystiran, dhirta ayaa diyaar u ah meelaynta dooxo cusub, taasina waxaa lagu rakibay dhab ahaan bartamaha taangiga, ka dib markii dhammaan hulalka ay si adag u buuxsameen ciidda cusub.
Qalitaanka ka dib, geedka waxaa la geeyaa meel joogta ah oo qolka ka mid ah oo ku siisa daryeel habboon.
Habka this transplanting ee beerta waxaa loo yaqaan "transshipment". Faa'iidada ugu weyni waa qadarka ugu yar ee dhaawaca geedka, taas oo ka dhalatay hannaanka cusub ee hargabka cusub ee lagu arkay hanti cusub. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u wareejisey ficus-ka dheriga rasmiga ah ka dib markii aad ku iibsato dukaanka, "wareejinta" kuma haboona arrintan. Qalitaanka waa inuu ahaadaa sidan soo socota:
Marka hore, warshad dhalinyaro ah oo ku saabsan hal usbuuc ka dib iibsashada waxaa lagu hayaa qolka loogu talagalay.
Qiyaastii hal maalin ka hor taariikhda qiyaasta qaliinka, dhirta waa in la waraabiyo si badan si ay u jilciso ciidda ubax.
Isla markiiba ka hor transplanting diyaariyo ciidda iyo dheriga. Xayawaanku waxaa la mariyaa iyada oo loo marayo shaandho ganaax ah, lakabka dufanka 2-3 cm oo dhagax ah, quraarado, iwm. Waxaa la dhigayaa hoose ee dheriga, taas oo 1 cm oo ciid ah la dhigay.
Marka xigta, ka saar dhirta laga bilaabo awooda hore. Taas awgeed, waxoogaa yar ayaa ka soo baxa dhinacyada oo idil, ka dib markii geedka lagala baxo oo ay weheliso substrate.
Dhismaha substrate waa in laga saaraa, waayo, tani waa tuubbo dhuuban oo dhuuban waa in si taxadar leh loo nadiifiyaa nidaamka asaasiga ah, ka dibna waa in lagu maydhaa biyaha heerkulka qolka.
Ka hor inta aadan ku beerin dheriga joogtada ah, nidaamka xididka waa in la kormeeraa joogitaanka cudurada kala duwan, ka dib, taas oo, haddii ay lagama maarmaan noqoto, gooyaan dhamaan xididdada dhaawacan.
Warshadda nadiifka ah waxaa la dhigaa bartamaha dheriga cusub, kadibna habka xididka si tartiib ah laakiin si adag u daboolaya nidaamka xididka leh carrada cusub. Marxaladdan, dhaawaca ama foorida xad dhaafka ah ee xididdada waa in si adag loo ilaaliyaa, sababtoo ah taasi waxay horseedi kartaa qulqulka iyo dhimashada ficus.
Qalitaanka ka dib, geedka waxaa la geeyaa meel joogto ah wuxuuna bixiyaa daryeel habboon.
Waa muhiim! Inta lagu jiro bedelka ficus, waxaa si xoog leh lagula talinayaa in aan qoto dheereynin ama ka weynaanin xididada xididada, sababtoo ah taasi waxay horseedi kartaa dib u soo kabashada dhirirka ka dib qaabsocodka ama xataa cudurada halista ah.
Daryeelka dhirta ka dib markaad transplanting
Inta lagu jiro usbuucyada ugu horeeya, beerka transplanting ee warshadu waxay muujinaysaa nidaam daryeel gaar ah, iyada oo jirkeedana lagu soo bandhigay culeys fara badan inta lagu gudajiro nidaamka. Sidaa darteed, si loo hubiyo in si haboon loo habeeyo, waa lagama maarmaan in la isticmaalo talooyinka soo socda:
Dheriga waa in laga fogaadaa qoraalada, dhibco heerkulka suuliga ah iyo qorraxda tooska ah, maxaa yeelay taasi waxay ka sii dari kartaa xaaladda guud ee ficuska.
Heerkulka ugu fiican ee warshadda muddadaas waa + 19-22 ° C.
Waraabiyaa dhirta waa inaysan noqon xad-dhaaf. Waxa ugu wanaagsan in qoyaanku si qaas ah u qoyaan, qadar yar oo biyo ah oo kaliya oo keli ah oo ah qolof yar oo qallalan. Si kastaba ha ahaatee, caleenta waa in la qoyaan 2-3 jeer maalintiiba leh dhalada buufin.
4 toddobaad ee ugu horreeya si ay u quudiyaan bacriminta ficus ah laguma talinayo.
Si loo abuuro shuruudo badan oo raaxo leh oo loogu talagalay la qabsashada iyo dardargelinta geeddi-socodka, dhirta waxay abuuri kartaa xaaladaha aqalka dhirta. Sidaa darted, dheriga ayaa si buuxda u xiran bac caag ah oo adag oo hufan. Dabadeed 1-2 toddobaad gudahood ficusku si ba'an ayaa loo buufinayaa buufin, ma iloobin hawo-dhireedka xilliga kuleylka ah 2-3 jeer maalintii 10 daqiiqo. Ka dib markaa, dheriga ayaa la gelin karaa meel joogto ah.
Haddii aad rabto ficuskaaga waqti dheer si aad uga farxiso muuqaalkiisa caafimaad, akhri xeerarka waraabinta ficus.
Qalabeynta saxda ah waa ballanqaad ma aha oo keliya qeyb ka mid ah xannaanaynta tayo sare leh ee ficus, laakiin sidoo kale xaaladda ugu weyn ee mudnaanta dheer. Sidaa darteed, hannaanka waa in loo soo dhawaadaa fiiro gaar ah. Geedku wuxuu u baahan yahay nafaqo-taajir ah, laakiin ciidda iftiinka ah, adeecida adag ee dhammaan murugada geedi socodka tallaalidda, iyo sidoo kale daryeel gaar ah xilliga ku-meel-gaadhka ku-meel-gaadhka ah. Kaliya kiiskan, taranka ficusku ma aha oo keliya jimicsi fudud, laakiin sidoo kale wuxuu bixiyaa dareen badan oo wanaagsan.
Video: tallaalka ficus
Falanqaynta internetka ee ku saabsan sida loo baadho ficus
Benjamin Ficus waxay leedahay xidido ku filan, sidaas awgeed badi boogta ma keento dhibaato iyo dhibaatooyin gaar ah. Diyaarso cabbir dherer ah (inta badan waxaad u baahan tahay isla sidii hore ama xitaa wax ka yar), ka iibso dhul aan ku salaysan peat, ku dar budada dubista - bacamululeed, perlite ama ciid webiga (si aad u sameyso isku dhafka), ku rid hoose ee dheriga lakabka dhooba-dheecaan-dhoobo (1.5-2cm). Ka dibna sii wad daahirinta ee xididdada ficus ka soo ciidda hore. Samee arrintan si taxadar leh, isku day inaadan waxyeeleynin xididada. Haddii peat ay adag tahay in laga saaro qalalan, markaa waxaad ku rusheyn kartaa berkedda biyaha ama hoosteeda biyo diirran oo ka yimaada tuubada. Очищать корни "до блеска" совершенно не нужно. После очистки корней поставьте фикус в пустой горшок и прикиньте по его корневой системе, сколько земли надо насыпать на дно. Насыпьте. Опускайте растение опять в горшок и начинайте аккуратно подсыпать грунт.Ku rusheey qaybo yaryar, marmar si khafiif ah u tufi dhulka dhulka hareeraha farahaaga. Fadlan ogow in jirridda geedka laguma dari karo. Ka dib markii transplanting dhul waa in la waraabiyo, laakiin ma aad u badan. Waraabinta dhirta ah waa in la sameeyaa oo keliya ka dib marka jeexjeexyada dhuuntu ay si buuxda u qalalaan (ugu yaraan hal toddobaad kadib). Haddii ficusku sii socdo inuu hoos u dhaco (waxay u badan tahay inuu sidan dhacayo), dabooli warshadda baakad, laakiin kiiskana ha lagu qaado biyo. Nasiib wacan
Qalab buuxda, markaad si buuxda u nadiifiso xididada iyo xididdada cayayaanka, nidaamka xididku waa waxyeello (xididdada yar yar ee jaqaan, sida caadiga ah, jooji). Sidaa darteed, ka dib markii beerista, nidaamka xididka ma shaqeeyo !!! Waxay qaadataa maalmo dhowr ah, mararka qaarkoodna isbuucyo si ay warshaduhu u nuugaan xididada cusub! Sidaa darteed, geedka iyo ma nuugi karo qoyaan - dhulka waa qoyan yihiin, iyo caleemaha u engegay, sypyatsya. Inta lagu jiro muddadan, dhirta waa in lagu waraabiyaa caleemaha! Waraabinta waa wax aan faa'iido lahayn. Dhaqdhaqaaqa dhulku ma qalajiyo.
Isku kari caleemaha laba jeer maalintiiba biyo yar oo diirran (qallalan). Oo ku rid baakad ku saabsan dhirta si loo yareeyo uumiga qoyaanka - aqalka dhirta lagu koriyo. Ie Nidaamku waa sida soo socota: buufin karaa subaxdii (uma baahnid inuu ku shubo, oo ku habboon buufin yar). Waxay ku dhajiyeen dhowr cirbadood oo cirrid ku leh dhererka dheriga, ama qooblaha (korka loo yaqaano), oo ku rid bacda cirbadahaas. Sidaas awgeed maaha inay taabato caleemaha. Fiidnimadii waxay qaateen xirmooyinka saacad-saacad ah. Oo mar kale: buufin, dhar xidhay, iwm. Hawo iyo daawada 2 jeer maalintii - maya yar. Intee in le'eg ayaa ku xiran xirmadan waxay ku xiran tahay sida ugu dhakhsaha badan ee xididka dib loo soo celiyo - laga yaabo dhowr todobaad - adigaa arki doona sida dhirtu u dareemayso, dhulkuna wuxuu bilaabi doonaa inuu qalalo.